क्रेट, सर्वश्रेष्ठ भूमध्य समुद्र तटको रानी | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | ग्रीस, समुद्र तटहरू
ग्रीष्म closerतु नजिक हुँदै गइरहेको छ र ग्रीस धेरै व्यक्तिहरूको गन्तव्यमा देखा पर्दछ जो पहिले नै आफ्नो बिदाको तालिका बनाइसकेका छन्। सब भन्दा क्लासिक साइटहरु मध्ये एक हो क्रेट, ग्रीक टापुहरूको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा बसोबास।
एक प्राचीन, टापु संस्कृति, एक लामो र समृद्ध इतिहास, सुन्दर समुद्री तट, स्वादिष्ट खाना, राम्रो लोकप्रिय संगीत र धेरै मूल्यवान पुरातात्विक साइटहरु यस टापु को पहिचान गर्दछ जुन आज हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने आशामा कि यो भोलि हाम्रो गन्तव्य हुनेछ ... हामी कसरी छौं क्रीटमा जाँदैछौं, हामी त्यहाँ के गर्छौं र यसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री किनारहरू के हुन्?:
1 क्रेट, भूमध्यसागरमा
2 क्रेट वरपर कसरी पुग्ने
3 क्रेट समुद्र तटहरू
मैले भनें क्रेट ग्रीक टापुहरूको सबैभन्दा ठूलो र अधिक जनसंख्या भएको टापु हो। यसको राजधानी हेराक्लिओन शहर हो, एउटा शहर जुन देशको सब भन्दा ठूलो एकमा पनि गनिन्छ। इतिहासको सब भन्दा पुरानो अध्यायहरू मिस्ने सभ्यतामा पर्दछ र नन्सोस दरबारको महल र अन्य पुरातात्विक भग्नावशेषहरू त्यस समयदेखि नै अवस्थित छन्, तर अहिलेको राजधानी पनि पुरानो शहर हो किनकि यसको जग XNUMXth औं शताब्दीको हो।
हेराक्लियन क्रेटको लागि तपाईंको गेटवे हुनेछ। यहाँ त्यहाँ वाणिज्यिक पोर्ट र फेरी पोर्ट छ यसले तपाईंलाई एन्टेंसको सन्तोरिनी, माईकोनोस, रोड्स, पारोस, आइओएस र पाइरासको बन्दरगाहमा ल्याउँछ वा लैजान्छ। यदि तपाईं अमेरिकाबाट विमानबाट ग्रीसमा आइपुग्नुभयो भने, तपाईं पक्कै एथेन्स भएर जानुहुन्छ भने तपाईं एयरपोर्टलाई पोर्टसँग जोड्नुहोस् र विमानबाट जहाजमा जानुहुनेछ। आदर्श ग्रीक राजधानीमा करीव तीन दिन बस्न र त्यसपछि छोड्नु हो।
जे भए पनि, यदि तपाइँ युरोपियन गन्तव्यबाट क्रेटमा पुग्नुभयो भने तपाइँ सिधा आउन सक्नुहुन्छ यो एक अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ। यो शहरबाट करिब kilometers किलोमिटर जति टाढा अवस्थित छ र एथेन्स पछि यो सबैभन्दा व्यस्त छ। हो, धेरै उडानहरू एथेन्स हुँदै जान्छन्। सब भन्दा सस्तो उडानहरू रियनेर वा इजीजेट जस्ता कम लागतमा हुने एयरलाइन्स हुन्, तर यदि तपाइँ गर्मीमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने यसलाई जतिसक्दो चाँडो किन्न सल्लाह दिइन्छ किनकि यो टापु एकदम लोकप्रिय छ।
त्यहाँ दुई अन्य एयरपोर्टहरू छन्, कम महत्त्वपूर्ण तर यो सम्भव छ कि तपाईंको उडानले ती मध्ये एक प्रयोग गर्यो। त्यहाँको सैन्य विमानस्थल छ चश्नियामा डस्कलागियाननिस, र त्यो सिटिया, जुन केवल घरेलू उडानहरूलाई केन्द्रित गर्दछ। हेराक्लिओन वा चनिया र थेसलोनिकी बीचको उडान minutes ० मिनेट र रोड्स एक घण्टा सम्म हुन्छ। यदि तपाईं अधिक साहसी हुनुहुन्छ तपाईं फेरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर यसले धेरै लामो समय लिन्छ।
त्यहाँ Piraeus बाट दैनिक सेवा वर्ष को लागी र दुई अन्य गर्मी मा थपिएको छ। सैन्टोरिनी, माईकोनोस र अन्य साइक्लेड टापुहरूबाट तपाईं लिन सक्नुहुनेछ छिटो catamarans। त्यहाँ नजिकका टापुहरूबाट अन्य मार्गहरू छन्, तर मेरो विचारमा यो पर्यटकहरूको लागि सबैभन्दा सिफारिश गरिएको हो। त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन्: अनेक, सी जेट्स, हेलेनिक सीवेज, लेन लाइन्स, उदाहरणका लागि।
यदि तपाईं कारबाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले बुक गर्नु पर्छ र उही। यदि तपाईं रातमा वा छिटो सेवाहरूमा यात्रा गर्नुहुन्छ। तपाईं कम्पनीहरूको वेबसाइटहरूमा टिकट किन्न सक्नुहुन्छ (ती प्राय: खोजी ईन्जिनहरूमा भन्दा सस्ता हुन्छन्), र त्यहाँ श्रेणी र यात्राको दूरी अनुसार भिन्न मूल्यहरू हुन्छन्। यदि तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने छुटका बारे सोध्नुहोस्।
क्रेट वरपर कसरी पुग्ने
पहिले यो भन्नु पर्छ कि हेराक्लिओन बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण शहरहरू पनि छन्: चानिया, लसिथी, रेथीम्नो, सितिया, एगियोज निकोलास र इरापेत्र। टापुको वरिपरि घुम्नको लागि त्यहाँ बनेको यातायात सेवा छ बसहरु। यो सस्तो र अपेक्षाकृत कुशल छ, यद्यपि तपाईं बसमा चल्नुहुन्छ जुन मार्गबाट ​​जान्छ र गाउँमा प्रवेश गर्दछ किनकि स्थानीय यात्रीले सोधेको छ। हेरकलिओनमा त्यहाँ दुईवटा केन्द्रीय बस स्टेशनहरू छन् र ती मध्ये एउटा सेवा केन्द्रित गर्दछ KTEL (बस व्यवसाय समूह)।
अर्को विकल्प छ एउटा कार भाडामा लिनुहोस् तर यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि क्रेडिट कार्ड सामान्यतया ग्यास स्टेशनहरूमा स्वीकार्य हुँदैन, मानिसहरूले धेरै यातायात संकेतहरूलाई आदर गर्दैनन्, स्थानीय चालकहरू उनीहरूको वरिपरि आउने तरिकामा धेरै आक्रामक छन् र शहरहरूमा पार्कि scar अभाव छ। पनि त्यहाँ ट्याक्सीहरू छन् तर यदि तपाइँको बजेट सीमित छ म यो सिफारिस गर्दैन किनकि यो महँगो सेवा हो। त्यहाँ जताततै ट्याक्सीहरू छन्, हो, र दुई दर: दिन र रात।
क्रेट समुद्र तटहरू
क्रेटका धेरै समुद्री तटहरू छन्। चानिया, हेराक्लिओन, रेथिमनमा, लसिठीमा, हर्सोनिससोमा समुद्री तटहरू छन् र केहि प्राकृतिक प्रसाधन तटहरू। गर्मी मा पानी तातो छ, जुलाईमा २ and र २º JulyC बीच र मेमा २०ºC। तिनीहरू कहिल्यै धेरै चिसो हुँदैनन् त्यसैले त्यहाँ त्यसो गर्ने मानिसहरू छन् सबै वर्ष पौडी खेल्न सम्भव छ। तातो पानी संग शान्त समुद्रहरु उत्तर तट मा हो। उनीहरुका लाईफगार्ड पनि छ। अवश्य पनि, हावाहरू शक्तिशाली छन् र छालहरू बनाउँदछन् यदि तपाईंसँग समुद्रमा पौडी खेल्ने अनुभव छैन भने ... सावधान!
दक्षिणी तटको समुद्र तटमा सँधै कम पर्यटकहरू हुन्छन् र त्यसैले कोही शिविरहरूले उनीहरूलाई छाउनी बनाउन छनौट गर्छन्, यद्यपि यो अनुमति छैन। दुबै एक तट र अर्कोमा, यदि समुद्र तट संगठित छ, तपाईं डेकचेयर र छाता भाँडा गर्न सक्नुहुन्छ ,, or वाeयूरो बीच। यो वैकल्पिक हो, यद्यपि तपाईलाई लाग्छ कि छाताहरूले सम्पूर्ण टापु ओगटेका छन् र त्यहाँ जहिले पनि स्वतन्त्र र स्वतन्त्र क्षेत्र छनौट गर्न सकिन्छ।
क्रेटको समुद्री तटहरू सुरक्षित छन् किनकि त्यहाँ कुनै खतरनाक जनावरहरू छैनन्। त्यहाँ केहि प्राकृतिक प्रसाधन तटहरू छन्, यद्यपि नग्नवाद आधिकारिक रूपमा अधिकृत छैन, यो सहन गरिएको छ। यो बनाउन असम्भव छ क्रेटमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरूको सूची किनभने त्यहाँ धेरै छन्, तर मेरो चयन र धेरै व्यक्तिको निम्न निम्न छन्:
बालोस: यो सेतो बालुवा र फ़िरोज़ा पानी संग एक राम्रो खुला समुद्र तट हो। यो कार वा डु by्गामा पुगेको छ, तर त्यहाँ कुनै बस वा लाइफगार्डहरू छैन। न त प्राकृतिक छायाँ तर छाता र डेकचेयरहरू भाँडामा छन्। एक हो समुद्री तट नग्नवाद मैत्री कम पानी। यो चानियामा छ।
Elafonisi: चानियामा पनि, यो एक धेरै पहुँचयोग्य समुद्र तट हो किनभने तपाईं डु boat्गा, बस, कार वा पैदल हिंडेर त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। सेतो बालुवा, शान्त पानी, न्युडिज्म सहन, मानिसहरू सर्फ गर्दै, र सबैजना रमाईलो गरिरहेका छन् निलो झण्डा।
Vai: यो लसिथीमा अद्भुत समुद्री तट हो जुन चारैतिर युरोपको सबैभन्दा ठूलो पाम वनले घेरिएको छ। पाँच हजार रूख!
प्रेवेली: यो रेथिम्नोको समुद्र तट हो जसमा नदी छ जुन समुद्रमा बग्छ, धेरै सुरम्य। यो समुद्री किनारमा पनि एक प्रकारको ताल बनाउँछ जुन पौडी खेल्नको लागि महान छ।
उसलाई मार: हेराक्लियनमा सबैभन्दा प्रसिद्ध समुद्री तट। एक हो हिप्पी बीच गुफा र रातो भूदृश्य संग। यो एक संगठित समुद्र तट हो र हरेक गर्मी मा यो एक लोकप्रिय होस्ट संगीत महोत्सव.
Agiofarango: यो एक समुद्र तट हो जुन Agiofarago घाटीको मुखमा छ, नजिकै गुफाहरू र गुफाहरू। त्यहाँ स्यान एण्टोनियो को एक धारा को लागी नदी हो कि समुद्र मा खाली, पानी पिउन को लागी आदर्श यदि गर्मीले समुद्री किनारमा जलाउँछ। तपाईं पहाडबाट वा घाटीबाट वा डु by्गाबाट हिंड्दै जानुहुन्छ।
स्यान पावलोसको ट्युन्स: यो मानिन्छ क्रेटमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू मध्ये एकयो न्यानो पानी छ र मानिसहरू गोपनीयता को खोजी मा आउँछन्। तपाईं त्यहाँ मात्र पैदल वा डु by्गामा पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कुनै प्राकृतिक छायाँ छैन तर तपाईं छाता भाडामा लिनुहुन्छ।
त्यो विचार गर्नुहोस् क्रेटमा १००० किलोमिटर भन्दा बढीको तटरेखा छ त्यसैले त्यहाँ दशौं छैन तर समुद्र तट सयौं, ज्ञात, लोकप्रिय, गोप्य, पृथक। सबै र सबै स्वादको लागि। यदि तपाईंसँग यस गर्मीमा लामो समय छैन भने, टापुलाई अर्कोको लागि वा अन्य मौसमको लागि विचार गर्नुहोस्। को कम मौसम नोभेम्बरदेखि मार्च सम्म हो, वातावरण बढी रमाईलो छ, वा मध्य मौसम जुन अप्रिल देखि जून र सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबर सम्म हो र हामीलाई पैदल यात्राको लागि उत्तम मौसम दिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » समुद्र तटहरू » क्रेट, सर्वश्रेष्ठ भूमध्य समुद्र तटहरूका रानी
विश्वमा सब भन्दा जिज्ञासु र माग गर्ने म्याराथन